प्रचण्ड नेकपाको पाइलट कि को–पाइलट ? जहाजले उल्टो दिशा समात्यो - The First Nepali Digital Newspaper from Australia (Ausnepal news)
प्रचण्ड नेकपाको पाइलट कि को–पाइलट ? जहाजले उल्टो दिशा समात्यो
प्रकाशित मिति: १९ असार २०७६, बिहीबार
काठमाडौं । दु्ई पार्टी एकीकरणका क्रममा नेकपाभित्र दुई अध्यक्ष किन राखियो भन्ने प्रश्नमा प्रधानमन्त्री समेत रहेका केपी शर्मा ओलीले जवाफ दिएका थिए–जेटमा दुई पाइलट हुन्छन् । दुई पाइलट भएको जेट डुब्दैन । ओलीले भनेजस्तै कीकरणको १३ महिनापछि नेकपाको जहाजले उल्टो दिशा समातेको छ। कान्तिपुर दैनिकमा खबर छापिएको छ ।
दुई नेताबीच अविश्वास यति बढेको छ कि व्यवहारमा ओली पाइलट र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड को–पाइलटको भूमिकामा सीमित भएको गुनासो पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूले गर्न थालेका छन् ।
दाहालनिकट नेता हरिबोल गजुरेलका अनुसार सरकारमा आलोपालो गर्ने सहमति र पार्टीमा दुई अध्यक्ष हुनुको अर्थ बराबरी हैसियत हो । एकीकरणयता अध्यक्ष दाहालले एक पटक पनि बैठक अध्यक्षता गर्न पाएका छैनन् । ओलीको अनुपस्थितिमा पार्टी र सचिवालयको बैठक बोलाउने अख्तियार पनि दाहाललाई छैन ।
‘एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइए पनि पार्टीभित्र भावना बढ्थ्यो, बराबरी हैसियतमा रहेका अध्यक्षले ओलीको अनुपस्थितिमा बैठक बोलाउन किन नपाउने ?’ गजुरेलले भने, ‘प्रश्न बैठक बोलाउन र अध्यक्षता गर्न नपाएकोमा होइन । भावनाको कुरा हो । एकैपटक बैठकको अध्यक्षता गर्न दिइएको भए पनि नेता–कार्यकर्तामा भावनात्मक सम्बन्ध बन्थ्यो, विवाद सतहमा आउँदैनथ्यो ।’
एक वर्षभित्रै महाधिवेशन हुने टुंगो नलाग्नु र सहमतिअनुसार सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने विषयमा समेत ओली अनुदार बन्दै जानुले पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताहरूलाई झस्काएको छ ।
उपनिर्वाचन मंसिर १४ गते, कुन – कुन क्षेत्रमा हुनेछन् निर्वाचन ?
काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा, प्रदेशसभा र स्थानीय तहका रिक्त ५० स्थानमा आगामी मंसिर १४ गते […]
एनसेलका ३५ टावरमा विप्लव समूहको आगजनी, यस्तो रै’छ आक्रमणको कारण
काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एनसेलविरुद्ध आक्रामक भएको छ। नेकपाका […]
पार्टी छोड्ने कागज गर्दै, रिहा हुँदै विप्लव कार्यकर्ता
जाजरकोट । विप्लव समूहका कार्यकर्ता पार्टी छोड्ने लिखित कागज गर्दै हिरासतबाट छुट्ने गरेका छन् । जिल्लाका […]
प्रधानमन्त्रीले लगाए नयाँ ठेक्कामा रोक, किन दिए यस्तो निर्देशन?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नयाँ ठेक्का सम्झौतामा रोक लगाएका छन् । निर्माण कम्पनीहरूसँग ठेक्का […]
पर्यटनमन्त्री भट्टराईको घोषणा : असफल भएको महसुस भएकै दिन पद त्याग्छु
काठमाडौं । संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उडड्यन मन्त्री योगेश भट्टराईले असफल भएको महसुस हुनासाथ मन्त्री पद […]
प्रधानमन्त्री कार्यालयले नै नवनियुक्त पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईलाई नचिनेपछि…
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टी स्थायी कमिटीका सदस्य योगेश भट्टराईलाई बुधवार दिउसो दुई बजे […]
कस्तो छ प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्य अवस्था ? यस्तो छ निजी चिकित्सकको विज्ञप्ती
अष्ट्रेलियाका सिड्नी र मेलबर्नसहितका केही शहरमा लोड सेडिङ
पुडासैनी आत्महत्या प्रकरणः न्यूज २४ टेलिभिजनको ल्यान्डलाइनबाट अस्मितासँग बारम्वार फोन
प्रधानमन्त्री ओली सिंगापुर प्रस्थान, १५ दिन सिंगापुर बस्ने
नयाँ बसपार्कको होटलमा महिला र पुरुष नग्न अवस्थामा मृत भेटिए